Kuongororwa gomarara rezamu kwakakosha | Kwayedza
19 Oct, 2018 - 00:10	 2018-10-18T08:16:12+00:00 2018-10-19T00:03:29+00:00 0 Views
Ndiri mudzimai ane makore 25 okuberekwa. Kubvira pakutanga kwemwedzi uno, vanhu vari kungopfeka zveruvara rwepink uye vachitaura pamusoro pegomarara remuzamu.
Kwandiri izvi zvinondityisa. Handina ruzivo rwekuti zvose izvi zviri pamusoro pei. Munhu angazive sei kuti ave negomarara remuzamu uye rinorapwa sei?
MuZimbabwe, gomarara rezamu riri panhamba pechipiri pazvirwere zvemhando iyi zvinobata vanhukadzi verudzi rwechitema uye rinotevera gomarara rechibereko.
Sangano reZimbabwe National Cancer Registry rinoti gomarara rezamu raive nechikamu che12.5% pazvirwere zvose zvemakomara kuvanhukadzi vechitema mugore ra2013.
Sangano iri rinoti zvakare chikamu che7% chevanhu vakafa nekuda kwezvirwere zvegomarara panguva imwe chete iyi.
Zvakakosha kuti munhu avhenekwe gomarara nguva iripo kuitira kuti ange achibatsirwa.
Ongororo yakaitwa inotaridza kuti kune vamwe vanogona kubatwa negomarara kudarika vamwe nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.
Zvikonzero izvi zvinosanganisira nharaunda inogara munhu.
Kuve nemuviri wakafutisa kana kukurisa zvisina tsarukano
Kusabereka kana kuita mwana wekutanga wave nemakore 30 okuberekwa
Wakambobatwa negomarara kune rimwe remazamu ako
Kugara uchinzwa kushungurudzika
Zvirwere zvegomarara, kusanganisira remuzamu, zvinokwanisa kudzivirirwa kuburikidza nekudya zvinovaka muviri pamwe nekuita mitambo inosimbisa muviri.
Zviratidzo zvinowanzoonekwa kuomarara kana kuzvimba pedyo nezamu kana muhapwa.
Kuongororwa gomarara rezamu:
MuZimbabwe zvinokurudzirwa kuti munhu atange azviongorora ega inonzi iyo paChiRungu Breast Self-Examination (BSE) sezvo mapundu anenge ari pazamu kana minyatso nguva zhinji achitanga kuonekwa nadungamunhu.
Gomarara rikaonekwa richiri kutanga zvinoita kuti chiremba akwanise kupa murwere mishonga inoshanda nesimba.
Zvaunofanira kutarisa kana uchizviongorora gomarara rezamu:
kuomarara kwenyatso kusingarwadze kana kukurisa kwetsinga
kuita tumapundu kana kuti rash isinganzwisisike panyatso kana pazamu
kuramba uchirwadziwa mukati mezamu
kuburitsa zvausunganzwisise zvaita seropa nepanyatso
kuita tumapundu kana kuti rash panyatso nenzvimbo yakatenderedza nyatso
kuomarara kusinganzwisisike kwenyatso
kuzvimba kana kurwadza kwemuhapwa
Zvaunofanira kuita kana uchizviongorora gomarara rezamu: